Uma une esiqandisini ephukile, noma nje wanquma ukuthenga entsha, nge abephule ubudala ubhekene ngokuzenzakalela ne nenani elimangalisayo iziphakamiso. Indlela ukukhetha esiqandisini kahle? Yini onobuhle imbala ngeke sithathe isikhathi esijana, ukulungisa amafriji okuyinto kuyoba eshibhile, futhi abanye amafriji kuzodinga yesondlo kancane kunamanye? Konke kulesi sihloko.
Ngakho, uma obladaete isabelomali encane ukuthenga isiqandisi, unake yakho brand elandelayo amafriji: Ariston, Indesit, Stinol, nge Atlant, Beko, le Nord, LG. Konke lokhu amafriji bayahamba ensimini ezwe elaliyi-USSR. Ake sixoxe ngazo ukuze. Indlela ukukhetha esiqandisini?
Lapho ekhetha Ariston esiqandisini, Stinol, Indesit (zonke izinhlobo ezintathu basonta inkampani Italy Merloni) stollknotes nawe izinkinga ezilandelayo kungenzeka: avuzayo refrigerant ku evaporator zapenennuyu esiqandisini chamber, ukuvuza eduze nentaba Ukushisa, ukuvuza of lokringovym uxhumano, ukuvuza tube borate. Ngokuvamile, konke ageleza. Zonke vyshepersichislennye ukulungiswa amafriji ebizayo. Esikhundleni the evaporator ezingxenyeni zapenennuyu kule ukulungisa imbala e Minsk, uzokhokhela kusuka 140 USD nangaphezulu. Ukuze esikhundleni esiqandisini gumbi evaporator esiqandisini ezimbili injini 110 USD Lolu uhlobo onokwethenjelwa kunayo yonke ukulungisa, ngoba uma senza nje ukulungisa ukuvuza endaweni ethile (kubiza cishe u- $ 50), ezimweni eziningi, kwakheka umgodi eduze stpustya ezinyangeni ezimbalwa. Ngokwami washintsha evaporator esiqandisini iwele-injini, lapho mina, nkosi aqedwa ukuvuza kanye ukuhlanekezela lokringam tube. Isiphetho: ikhasimende kungaba eshibhile nje esikhundleni isparitel.Bolshim Russian bantule Ariston amafriji, Indesit, Stinol kuyinto eliphansi plastic, the fragility izibambo, emashalofini.
Amafriji Beko - kungcono indaba ezahlukene. Ngaphezu ukhwaliti ongaphakeme amapulasitiki, ngokuvamile kwenzeka delamination zapenennuyu esiqandisini ekamelweni evaporator. ongakhetha yokulungisa: esikhundleni evaporator (140 USD noma ngaphezulu), esikhundleni iKhabhinethi (eqolo). Ukukhetha isiqandisi Beko angase abe yimpumelelo, vporochem njengoba ukukhetha imbala Indesit futhi Ariston, kodwa hhayi kaningi njengokuthanda singathanda ...
LG amafriji. Lezi amafriji ukhiqiza sitshalo Ruza (esifundeni eMoscow). ekuhluphekeni kwabo kuyafana ukuthi brand odlule: Ukuvuza in zapenennuyu ingxenye. Kodwa kukhona omunye nezinkinga okwamanje: i capacitor kuyinto zapenennuyu kakhulu ingxenye, futhi ukuze uthole iphaneli sensimbi. Izindleko wokulungisa esiqandisini e Minsk mayelana 150 USD Isikhathi esining impela okudinga ukulungiswa, ngisho 4-5 ehlobo Coolers.
Amafriji Atlanta. Ngithathe alikhulumi mayelana Atlanteans iyonke. Ukukhetha esiqandisini Atlanta, ngezinye izikhathi esihle "ukungenisa" engabizi imbala. Kodwa kukhona ezinye onobuhle ngawo akukuhle svzyvatsya. Lokhu Atlanta 4012. Lokhu esiqandisini nje killer! Buciko ukulungisa amafriji e Minsk, ngase ebhekene nale imodeli kathathu. Futhi zonke kathathu Ngizokhumbula isikhathi eside ... Kuzo zonke izimo ezintathu engu imbala Atlant 4012 sathatha isikhathi esingaphansi kweminyaka 5 (imboni engu-3 yesiqinisekiso). Kwesinye isenzakalo ashisiwe motor 3 (4 izinsuku) proizvoshlo odla tube capillary (isobutane atypical ngoba amafriji) kube yibo ukuvuza zapenennuyu tube ingxenye. Esikhathini yesibili zonke efanayo, kodwa injini lashintsha kanye kuphela. Endabeni lwesithathu, ukuvuza wayengekho kuphela evaporator, kodwa futhi "Ukushisa iluphu." Akunakusetshenziswa do hhayi lokudlela nalolu hlobo!
Nord amafriji ukwenza ehloniphekile inkampani vysheperichislennym brand amafriji. Zonke izinkinga ezifanayo.
Lapho ekhetha esiqandisini ukugwema ukuvuza we zapenennuyu kangcono ukuthenga amafriji Okugcwele kungekho uhlelo frost, okuyinto umane awunawo evaporator ekamelweni esiqandisini.
Ngakho yini ukuthenga? Lo mbuzo: Kawuphenduli lutho. Ngisho brand eliphezulu ezifana Daewoo, Samsung, Bosch ngokuvamile kulimaze ngokushesha ngemva sewaranti. Ukukhetha esiqandisini brand eziqinile wena umane unciphise amathuba zokugwema ukuphuka of esiqandisini kuqala. Ngeshwa, izinsuku "engunaphakade 'amafriji" Zil "iphelile ... amafriji Modern zenzelwe iminyaka 7-10.
Inhlanhla kuwe lapho uthenga isiqandisi!
Negesi endzaweni lephephile "Indesit": incazelo emfushane
Regulator isivinini injini
Ukushisa okuvela ngaphansi komhlaba futha: ukusebenzisa izici
Umsakazo Motorola TLKR-T80 Extreme: Ukubuyekeza nempendulo
Hot-ncibilika ingcina (isibhamu): kanjani ukukhetha? Amathiphu namacebo
Indlela yokwenza ividiyo kusuka ezithombeni: ukudalwa ngesinyathelo ngesinyathelo se-movie ku-Picaso
Ukudala oqalisekayo USB drive Ubuntu Wabasaqalayo
Ifenisha ukukhiya: izinhlobo, ukufakwa, imihlahlandlela ngokukhetha
I-Tablet Uhlolojikelele Treelogic Brevis 715DC 3G: ukubuyekezwa kanye izici
Isimo social umndeni: kuyini?
Inkulumo Echaza Isimo Sezwe umsuka theory ngamadoda kanye essence yayo
Kungani iphupho yokuxoshwa? incwadi Dream uzokutshela!
Indlela ukwazi Inombolo yokubhaliswa we FIU ukuphakela izitatimende. Ujwayele ikhalenda intela ukuze lula uhlelo intela 2012
Indlela ukukhetha amabhuzu yezingane?
Eningiliziwe iresiphi inyama French kuhhavini